Sida aad u maareeyaan galal in your computer aad go'aan ku gaadhi kartaa in aad tirtirto files aan loo baahnayn in la abuuro meel dheeraad ah oo aad computer. Waxaa jira laba siyaabood oo la tirtiro files in your computer. Waxaad iyaga tirtiri kartaa si joogta ah si ay u ma la raadsan karaa in qashinka ah ee isticmaala Mac ama recycle bin in daaqadaha. In daaqadaha amarka tan la gaadho adigoo gujinaya wareejin + tirtirto. Halka tirtirka caadiga ah ee riixaya furaha Delete guuro faylka si dib bin inaad halkaas iyaga ka soo ceshano karo halkaas ka. Sidaa darteed waa in aad ka taxadartaa oo ku saabsan sida aad tirto faylasha on your computer.
Marka aad si joogto ah tirto faylasha by wareejin gujinaya + tirtirto waxaa run ahaantii ma tirtiray. Dhab ahaantii meel ama goob ka mid ah faylka tirtiray waxa lagu calaamadiyaa lacag la'aan ah ama la heli karo dib u isticmaal. Sidaa darteed, files weli waxaa laga heli karaa ilaa aad isticmaali bannaan in uu yahay markii files yihiin overwritten on. Taas macnaheedu waa in files weli la soo kabsaday karo, maxaa yeelay, iyagu ma ay la tirtirayaa ka drive adag of your computer.
Maxaa la sameeyaa ka hor inta soo kabsaday ah wareejin tirtiray files
Sidaas marka aad tirto faylasha adiga oo aan iyaga kaydinta in bin recycle iyo aadna doonayso inaad ku soo ceshano waa in aad joojisaa isticmaalka kombiyuutarka. Sababta sidaas samaynaya waa si looga hortago in xogta overwriting goobta aad tirtiray faylasha. Your computer calaamadee doonaa lacag la'aan ah in loo isticmaalo iyo haddii aad sii waddo isticmaalkooda your computer iyo badbaadin xogta aad aakhirka degan meesha la files cusub doonaa.
Marka la eego horumarka tiknoolijiyada maanta aad soo kabsado xogta aad si qalad ah la tirtiro ka kombiyuutarada drive adag. Waxaa jira qalab kabashada xogta awood leh in soo naqshadooda oo quruxsan si wax loogu qabto baahida xogta aad. Waxaa wanaagsan in ay leeyihiin aqoon qalabka kabashada xogta sida tan Wondershare kabashada xogta . Inkasta oo ay jiraan dad badan oo software halkaas Saaxiibkiis runta u soo kabashada xogta aad waa Recovery xogta Wondershare.
Features iyo hawlaha Wondeshare Recovey xogta
Barnaamijkan waxa diyaar ahaadaan si loogu download ay goobta rasmiga ah http://www.wondershare.com/data-recovery/ . Barnaamijkan ayaa waxaa si fiican danbeeyay oo laba ka mid ah muuqaalada oo quruxsan oo awoodda inay meel daaqadaha iyo dadka isticmaala Mac. Wixii Mac isticmaala download kabashada xogta Wondershare u Mac. Waxaad sidoo kale waxa ay ka iibsan kartaa ama isku day version maxkamad lacag la'aan ah. Waxaa muhiim ah in la ogaado waxa ay taageeraan nooca ugu dambeeya ee daaqadaha waa daaqadaha 8, daaqadaha 7, Vista daaqadaha iyo daaqadaha XP. Halka u Mac ay taageerto Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
Sidee software this soo kabsado xogta? Tani waxay noqon kartaa su'aal ah usugnaaday maskaxdaada. Waa wax cajiib ah. Barnaamijka waxa uu leeyahay interface weyn kuu oggolaanaysa in aad soo kabsado xogta iyadoo lagu eegayo files aan shaqaaleyn khabiir ku ah. Waxaa la iman afar nooc oo ah qaabab badan soo kabashada, taas oo ka yar heerka Mode
Lumay kabashada file inuu ka soo kabsado files tirtiray.
Recovery ah Barzakh, inay dib u soo ceshano xogta waayay portioning iyo resizing
Ceeriin Recovery sida caadiga ah kabanayso files in ay qaab hore. Waxaa la isticmaali karaa marka labada hababka soo kabashada ku guuldareysto.
Kabashada biloow kaa caawinaysaa in aad sii wado kabashada hore.
Waxaa jira hab Wizard ah in aad isticmaali karto markii aad tahay laylis. Waxa aad ka maqan su'aal yar ka dibna waxaa soo kabanayo xogta in kastoo aan la wax ku ool ah sida habka caadiga ah. Wondershare Kabashada xogta waa agabka ugu wanaagsan maadaama ay tahay compactible qalab la mid ah sida camera digital, drives adag, kaararka SD, kaararka Memory, telefoonada, ciyaartoyda warbaahinta iyo drives qaadi karo. Laga soo bilaabo qalabka aad soo kaban karto, Cajalado, videos, sawiro, archives, emails, iyo waraaqaha. Haddii aad tirtiray files kuwan, ama iyaga laga badiyay ay sabab u tahay fayraska, ama ay sabab u tahay formatting, ama jeermiska fayraska aad weli iyaga ku yeelan karaan dib u isticmaalaya software this. Oo weliba barnaamijkan kuu ogolaanaysaa inaad ku eegaan files in la helay.
Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray isticmaalaya kabashada Data Wondershare
Haddii aan ugu buuqaysaan oo dheeraad ah ha la arko sida inuu ka soo kabsado files aad tirtiray adigoo gujinaya Shift iyo tirtirto. Hubi in aad ka soo bixi app ah oo bilaabay in your computer.
Step1 Select a Mode Recovery File
Marka aad furto barnaamijka aad arki doonaan hababka soo kabashada ku xusan la Hanuuniye waxaa hoos ku qoran. Tan iyo markii aad rabto in aad soo kabsado files tirtiray dooro file u Khasaaray soo kabashada hab.
Step2 Dooro nooca File iyo Scan
Waa kuwee file noocyada ha aad rabto in aad soo kabsado? Dooro files la doonayo by sixitaanka on kasta. Oo halkaasaannu ka riix Next si ay u aqoonsadaan drive in aad laga badiyay faylasha.
Wixii files si aad u solidly baxey dhaqaajiso sahlo Deep Scan inkastoo dheer ayey qaadan doontaa in iskaan intii la filayay. Markaas riix badhanka bilaabatay iyo dulqaad files yihiin soo kabsaday.
Step3 Isu eeg ceshan Files
Kadib markii geedi socodka iskaanka waa dhameystiran u marsiiyey muuqan doonaa magacyadooda iyo waddada. Tayada files soo kabsaday ayaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa sida labada ama xun. Waxaad ku eegaan karo warqadaha, Cajalado iyo videos hor kabashada final. Ka dib markii ay go'aan ka waxa ay ku soo kabsadaan sumaddii files jecel oo guji Ladnaansho . Ugu dambeyntii waxaan iyaga ku badbaadin in drive ka duwan.
Soo qaado nuqul ka mid ah qalab boosaska badan in kaban karto xaalad kasta oo ah lumitaanka xogta oo wuxuu ku raaxaysan waxa dunida inteeda kale waxaa la cayaaray in.
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado wareejin tirtiray files